Uhlu lwamanani entengo kamatilane we-OEM & ODM Rayson
Ukuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle okukhiqiza, kanye nensizakalo ephelele, iRayson ihola embonini manje futhi isakaza iRayson yethu emhlabeni wonke. Ngokubambisana nemikhiqizo yethu, izinsizakalo zethu nazo zinikezwa njengezinga eliphakeme kakhulu. I-Queen Box Mattress Siyethembisa ukuthi sinikeza wonke amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kufaka phakathi umatilasi wendlovukazi kanye nezinsizakalo eziphelele. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, siyakujabulela ukukutshela.A Uhla olubanzi lwezivivinyo zeRayyson lwenziwe. Lezi zivivinyo zihlanganisa ukuhlolwa kwamandla komthungo, ukuhlolwa kombala, ukuhlolwa kokumelana nombala we-abrasion, nokuqina kokuqina.